Ny porofo fa misy Andrmntra - Dinika forum.serasera.org
Ny porofo fa misy Andrmntra
Fitohizan'ny hafatra : Ny porofo fa misy Andrmntra
Valiny : 143
rhaj0 - 25/02/2018 17:31
Aleo atokana atao mazava mihintsy ity fa zava-dehibe loatra.
Ka efa narosoko ity "porofo" iray ity, nefa moa tsy mbola mety confirmer-n'i Gasy1zay, ka dia aleo tsongotsongoina ihany i Gasy1zay, ngo dia..
ka "porofo" ny fisian'Andmntra ve ity ry Gasy1zay sa TSIA?
POROFO 1, ary i Gasy1zay mihintsy no vavolombelona Nisy fotoanany i Andrmntra en personne, eny, "en personne", dia tena niondrika teo an-doham-pandrianan'i Gasy1zay, mba hitahy azy HONO. Fa @ io fotoana niondrehany io indrindra, en même temps et exactema, atsy @ mil kilometres je m'en fous, dia nisy ity zazakely syriana, matin'ny baomba narotsak'i Assad. Syriana kristiana ilay ankizikely. Fa tena naleon'izao Andrmntra izao HONO niondrika teo an-doham-pandrianan'i Gasy1zay, mba hitahy azy HONO.
Ary dia io "voatahy" io i Gasy1zay: fiadanana, fahasalamana, asa tsara... = "porofo"
Ary dia ilay zaza syriana (kristiana) nijafajafa talohan'ny nahafatesany; efa maty = "porofo"
gasy1zay - 26/02/2018 14:58
"Fa Kristy no anton’ ny ahavelomako, ary ny fahafatesana no hahazoako tombony."
ny fijerin'i rhaj0 dia fijerin'olona tsy mino ny fiainana mandrakizay dia ny amin'izao fiainana izao ihany no hitsaran'ny asan'Andriamanitra.
Raha raisiko ilay ohatra nambaranao rhaj0 dia tohizako kely, aiza moa zany ilay zaza kristiana zao? amin'i rhaj0 mety hoe ao ampasana? fa aminay kristiana dia any an-danitra miaraka amin'i Jesoa Kristy.
Ka i rhaj0 mety ny eto an-tany ihany no tian'ingahy na dia misy ady, baomba, sns aza fa ny anay dia tany fandalovana ny eto ary ny tanjona dia ny ho tafaray amin'ny Tompo any amin'ny fiainana mandrakizay.
rhaj0 - 26/02/2018 15:07
Asafotofotoy foana ny resaka Gasy1zay aa... "porofo" no loha-hevitra, fa akapokapoky ny Gasy1zay eto ny "fiainana mandrakizay". In-1 mandeha nasian'I Gasy1zay "hazo fijaliana" tampotampoka teo ny resaka, nefa resa-boatavo no natao t@ izay.
Ka aleo iverenana milamina eee..
PORFO == tena "niondrika teo an-doham-pandrianan'i Gasy1zay, mba hitahy azy HONO" izao Andrmtnra izao, ary "porofo"-n'izany, dia io Gasy1zay io, "vavolombelona" ary mahita "fiadanana, fahasalamana, asa tsara..."
izay ve ilay izy eee? "porofo" ???
gasy1zay - 26/02/2018 15:14
Ka tsy azoko hoe porofo aona moa? Andriamanitra nilaza fa hihaona aminao ao amin'ny efitranonao mangingina zany hoe entre izy sy ianao io fa tsy misy idiran'ny hafa, porofo izany amiko zavatra afaka aseho ny be sy ny maro, fa raha hoe porofo fa mitahy izy dia ie azo lazaina hoe porofo ny fahasitranan'ny kristiana narary aretina tsy mety sitran'ny siansa, fa io hoa mila mivonona i rhaj0 ny hanadihady satria isika tsy misy mahafantatra ny fiainan'ny ilay marary sitrana
endriny - 26/02/2018 15:26
Ka tsy azoko hoe porofo aona moa? Andriamanitra nilaza fa hihaona aminao ao amin'ny efitranonao mangingina zany hoe entre izy sy ianao io fa tsy misy idiran'ny hafa, porofo izany amiko zavatra afaka aseho ny be sy ny maro
Fa tena tsapanao hoe teo amin'ilay efitrano mangina nisy anao mihintsy Atra
Ahoana no nahatsapanao azy? volovoloina ve sa malandilandy?
Fa hoentiko amin'ny resak'i Jesosy ny ahy e.
Raha misy roa na telo vory amin'ny anarako dia eo afovoany aho.. Tsy nisy resaka mihintsy hoe raha ianao irery no miresaka momba ahy dia eo akaikinao aho.
Ka aza manitatra re e
Ny sainao no amboarinao fa eo misy Atra, na dia tsy misy afa tsy rivotra aza eo. Mety misy setroka ihany koa avy ao an-dakozia, fa midonaka be ilay saribao
gasy1zay - 26/02/2018 15:40
Tsy mitovy ny fisehony /firesany/fifandraisany amin'ny tsirairay fa anjaranao no mitady azy dia ho hitanao eo e!
gasy1zay - 26/02/2018 15:43
ito ny boky vakiana ry endriny raha te hahalala ianao a :
raha te hitady anaty baiboly ndray dia feno koa ao
rhaj0 - 26/02/2018 15:58
Azoko ny "Sa Présence" ry Gasy1zay aa.. ka ampifandraisinao @ ilay "porofo" niroso io izany ilay izy, ka dia "manaiky" (fa tsy sahy miteny) izany i Gasy1zay, fa "porofo" ny fisian'Andmntra izany HONO ity, ary i Gasy1zay mihintsy no "vavolombelona". good!..
gasy1zay - 26/02/2018 16:11
fa ny fanontaniko dia hoe raha mahita porofo tsy azo lavina ve nareo tsy mpino dia inona no hataonareo?
rhaj0 - 26/02/2018 16:16
Avoahy aloha ilay "porofo" ry Gasy1zay aa... Dia tena io ambony io izany ny "porofo" an..
(tena asio ENY fa sasa-miandry aho ee
gasy1zay - 26/02/2018 16:37
ilay fahasoavana azo ety an-tany aloha dia azo lazaina hoe "porofo" tokoa e, fa ny olana dia ilay tena zava-dehibe ao ambadikin'ny fahafatesana tsy hitako zay porofo omena anao fa za tsy mbola tany na dia misy aza ireo mijoro vavolombelona hoe efa tany no niverina.
rhaj0 - 26/02/2018 16:50
gasy1zay aiza moa zany ilay zaza kristiana zao? amin'i rhaj0 mety hoe ao ampasana? fa aminay kristiana dia any an-danitra miaraka amin'i Jesoa Kristy.
gasy1zay ao ambadikin'ny fahafatesana tsy hitako zay porofo omena anao fa za tsy mbola tany
Okey dokey.. ny @ "fiainana mandrakizay" sy ny "ataon'Andmtnra" ny @ izany, dia TSISY "porofo" izany, hozy Gasy1zay, fanefa moa, matavy ny resaka eo, ary toa io "fiainana mandrakizay" io mihintsy no "foto-tsakafon'ny Kristiana". FA TSISY POROFO izany ee....
finoan'i Gasy1zay - ary voaporofo izao Andrmntra izao HONO niondrika teo an-doham-pandrianan'i Gasy1zay, mba hitahy azy HONO.
ndroooo... rahefa Dessambra iny, dia hanihaniana ny ankizy.
fanihaniana ny ankisy rahefa noely Mody mitangorona eo ambaravarankely zahay lehihe, dia mody hoe:
- "O rankizy aa... iny i PN!!.. Faingàna fa nareo ilaozanareo milalao any an'efitra fotsiny tsy niandry"
Dia rehefa tonga nihazakazaka ny ankizy, dia mody hoe:
- hheeee... efa lasa izy.. iny dila ambadiky ny hazo iny.
- ka mbola andeha hanenjika an'ilay Zaza syriana kristiana (darofan'i Assad baomba) izy eee...
Dia tena mitovy @ Gasy1zay sy ny finoany ihany izany, na ny anay mba paozitiva koakoa
mirananirina - 26/02/2018 17:06
Hihi ???? mampihomehy koa izy izany.
Misy Andriamanitra tsy hita maso...dia izay ilay finoana mino dia mino. Ohatra ny hafa finoana hoe mino bouddha ireny ohatra. Nijery reportage aho teo izao dia nisy ireo olona nandoro sakafo fonosina anaty lamba mba hangatahana @ Andriamanitra ho fitahiana ireo biby fiompy ananany.
rhaj0 - 26/02/2018 17:12
.. dia rehefa "voatahy" ireo biby fiompy, dia "porofo" izany fa "velona Jesosy"..
Toa io "voatahy" io i Gasy1zay, ary "porofo" sy "vavolombelon'ny Finoany" i Gasy1zay fa "velona Jesosy"
gasy1zay - 26/02/2018 17:37
Fa raha mahita porofo tsy azo lavina ve hoa nareo ry rhaj0 dia inona no hitranga?
rhaj0 - 26/02/2018 17:40
(ataovy milamina dia misesy ny resaka fa ry Gasy1zay koa mitsamboaboatra.. ngo dia asianao "hazo fijaliana" eo indray ny resaka, izay vao tena very)
Ka ireo izao "porofo" ry Gasy1zay: ny biby fiompy sy Gasy1zay dia "voatahy". "Velona Jesoa!!".
Azo lavina ve ireo sa tsy azo lavina ry Gasy1zay??
(rahefa voavaly io fanontaniana io, izay vao ho hita eo "inona no hitranga" eee...)
gasy1zay - 26/02/2018 18:05
Ok tena anaty baiboly io ka, hotahiana ianao sy ny biby fiompinao
gasy1zay - 26/02/2018 18:14
Alohan'ny hamalian'i rhaj0 dia mba haneho ny hevitro aho, ahy manokana ito an! tsy anaty baiboly fa mba hevitro.
Amiko manokana dia tsy hisy velively porofo mivaingana afaka eken'ny be sy ny maro tsy azo hidivirana fa misy Andriamanitra, satria raha izay no hitranga dia tsy finoana intsony no hanantonantsika azy fa tahotra, tahotra ny ho lasa any amin'ny helo.
Ka raha mazava be hoe misy Andriamanitra = misy ny devoly=misy ny helo= misy ny makany amin'ny helo= izay tsy te hakany @ helo dia manantona an'Andriamanitra
Ny sitrapon'Andriamanitra anefa dia ny hanantona azy amin'ny finoana isika, hitady azy amin'ny finoana.
rhaj0 - 26/02/2018 18:41
gasy1zay Amiko manokana dia tsy hisy velively porofo mivaingana afaka eken'ny be sy ny maro tsy azo hidivirana fa misy Andriamanitra, satria raha izay no hitranga dia..
Ka TSISY izany ny "porofo" ry Gasy1zay, satria tsy HO eken'ny besisnimaro tsinona, hoz'ianao; IZay ve???
Mbo karazana "mpino" ahoana koa azany ianao izany ry Gasy1zay?
1- Nataok'ty "absolu" ny "porofon'izao Atra izzao" fa tsy hoe, "miankina @ besinimaro".
2- Dia @ izay koa, ny manahirana an'i Gasy1zay, dia ny "vokatry ny Fitombenan'ny porofo", hoe raha "marina" ilay inoan'ny olona, dia maninona? Lasa "manantona fa matahotra" fa tsy hoe "manantona fa mino" HONO ny olona. Ka dia aleo izany TSY atao mazzava ny "porofo" f'avelao ho manjavozavo ao?
gasy1zay - 26/02/2018 19:34
Ny zavatra voaporofo araka ilay porofo andrasanao re ry rhaj0 dia tsy misy resaka finoana intsony a!Raha marary ianao rhaj0 ka sitrana, efa voaporofo amin'ny analyse dokotera fa sitrana, tsy afaka hilaza intsony ianao hoe mino aho fa sitrana satria efa voaporofo fa sitrana, tsy "foi" tsony ny resaka fa "constat"